किन दुख्छ टाउको ? कस्तो दुखाइ हुन्छ जटिल ?::Nepali News Portal from Nepal
डा. रीमा राजभण्डारी
कस्तो दुखाइ जटिल ?
टाउको निरन्तर दुखेमा अर्को उपचार हुन्छ। त्यस्तो दुखाइलाई तीनदेखि ६ महिनासम्म खाने औषधी दिइन्छ। जसबाट महिनामा धेरै दुख्नेको फ्रिक्वेन्सी घटाउन सकिन्छ।यससँगै घरेलु
उपाय ‘बायो फिटब्याक’, योगा, शारीरिक व्यायामले धेरै हदसम्म टाउको दुख्न कम गर्छ।
माइग्रेन हेडेक र टेन्सन हेडेक एकैपटक भएपछि जीवन खतरामा नभए पनि ‘क्वालिटी अफ लाइफ’ नै घटेर जान्छ।दै
निक टाउको दुखेमा गर्नुपर्ने जति काम गर्न सकिँदैन। भएको जाँगरसमेत हराएर जान्छ जसले गर्दा सधैँ यस्तै हुन्छ कि, कतै मानसिक समस्या त होइन भन्ने सोच आउनसक्छ। तर यसलाई मानसिक समस्याका रूपमा लिन जरुरी छैन। चिकित्सकको परामर्श लिनु नै उचित हुन्छ।